Haayada cunada aduunka u qaabilsan QM oo baaraysa eedaymaha raashinka dhacay ee Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeHomeHaayada cunada aduunka u qaabilsan QM oo baaraysa eedaymaha raashinka dhacay ee Soomaaliya
June 16, 2016 Abdi Omar Bile Home 0
Haayada cunada aduunka u qaabilsan Qaramada Midoobay (WFP) ayaa shalay oo Arbaco ahayd sheegtay in ay baarayso eedaymaha sheegaya in ay isku dayday in raashin dhacay oo waxyeeloobay u geyso dadka dega gobolka Gedo ee Soomaaliya.
Taliye sare oo booliis ah, Cabdulaahi Bariise ayaa sheegay in laamaha amaanka ay Talaadadii qabteen diyaarad rabtay in ay ka duusho caasimada Muqdisho oo ay u duusho magaalada Garbahaaray, sababtoo ah 100 jawaan oo cunada diyaarada saarnayd ayaa waxaa kamid ahaa waxyaabo dhacay.
Saliida cunada lagu karsado ayaa dhacday bartamihii sanadkii 2015-ka, markii ay dadka deegaanka ay soo saaraan galayda, digirta iyo qamardiga ayaa lasoo saaraa raashin lagu kaydiyay bakhaaro waa weyn oo Muqdisho ku yaala, ayuu yiri Bariise.
Bariise iyo sarkaal booliiska ah oo la dhaho Cali Yare ayaa sheegay dad badan oo ay kamidyihiin shaqaale Soomaali ah oo WFP katirsan in la xiray.
Waa markii kowaad oo diyaarad wada cuno lagu qabto gudaha Soomaaliya.
“Waxaanu fiirinaynaa dhacdadaan,” sidaa waxaa tiri Challiss McDonough, oo ah afhayeenka WFP oo ku sugan magaalada Nayroobi.
“Uma malaynayo wax cuno ah oo dhacday in ay ku jiraan adeegyadayada Muqdisho, laakiin waaanu baaraynaa haddii ay jiraan badeeco laga yaabo si aan wanaagsanayn in loo kaydiyay oo waxyeeloowday,” ayay tiri.
“Badqabka dadka aanu caawinayno waa muhiimadayada ugu saraysa, waxaana samaynaa wax walba oo macquul ah oo lagu ogaanayo in raashinka aanu qaybinayno uu la kulmo heerarka ugu sareeya ee tayada iyo badqabka,” ayay ku dartay afhayeenku.
“Waxaanu xiriir la leenahay haayadaha gudaha waxaana rajaynayaa in xaalada si dhaqso ah loo xaliyo,” ayay tiri afhayeenka haayada cunada aduunka WFP oo wareysi siinaysay wakaalada wararka Jarmalka ee DPA.
(Warbixintan waxaa qortay wakaalada wararka Jarmalka, DPA, waxaa turjumay warsidaha Puntland Mirror)
June 6, 2016 Madaxweynaha Soomaaliya oo booqday xerada qaxootiga Dhadhaab
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Cabdulqaadir Jaamac Dirir u magacaabay taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada, hal maalin kadib dilkii taliyihii hore, sida lagu sheegay digreeto ka soo baxday madaxtooyada maanta oo Isniin ah. [...]
AMISOM Ready to Secure Somalia’s Electoral Process
The African Union Mission in Somalia (AMISOM) is gearing up to provide security to ensure a peaceful vote during the upcoming electoral process in Somalia, its head Ambassador Francisco Madeira has announced. AMISOM has already [...]
Rome-(Puntland Mirror) In ka badan 240 qof ayaa laga cabsi qabaa in ay ku dhinteen labo doonyood oo ku haraqmay badda Libya, sida ay sheegtay haayada Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga. Carlota Sami, oo ah [...]